I-China CE i-ISO eqinisekisiweyo i-1ton i-2 ton i-3 i-ton ye-3,5 ye-dizeli ye-forklift eyenziwe e-China YOKUTHENGISWA kwefektri kunye nabenzi | Ukunyaniseka
I-CE ye-ISO eqinisekisiweyo ye-1 itoni ye-2 yethoni ye-3 yeetoni ezingama-3,5 zeetoyile ezenziwe e-China Zathengiswa
Indawo erhabaxa yokuPhakamisa idizili yeDizili eveliswe yinkampani yethu ineetoni ezi-3 ukuya kwezi-9, ezixhotyiswe ngenjini yemveliso eyaziwayo, idrive-wheel drive, ipleyiti yensimbi eqinisiweyo, ifuselage ezinzileyo, ukusebenza ngokulula, ukujika okuguqukayo, ilizwe eliphambeneyo elilungileyo ukusebenza kunye nokuqhuba ngokubanzi.
Iilori ze-forklift zeNdawo erhabaxa ezenziwe nge-hydraulic transmission, itayitile ebanzi kunye nokuqhuba kwevili ezine, zinobuchule obuhle kwilizwe elinqamlezileyo. Inokuqhotyoshelwa nazo zonke iintlobo zezixhobo ezikhethiweyo. Inokulayisha ngokukhuselekileyo kwaye ihambise iimpahla kumathambeka nakumhlaba ongalinganiyo.
Isetyenziselwa indawo yokwakha, iiyadi zemigodi, imigodi yokwakha, iiyadi zamatye, ubunjineli boluntu, iindawo zehlathi lentaba, njl.
I-forklift ye-Off-road inokuhamba okuhle, ngaphandle kwendlela kunye nokuthembeka. Iyakwazi ukulayisha, ukuyothula, ukuhambisa kunye nokuhambisa ukhuseleko lweempahla kwithambeka nakwindawo engalinganiyo. Inokuxhotyiswa ngemfoloko yemithwalo kunye nokunye ukuncamathisela ukuphucula ukusebenza ngokukuko.
Umzekelo U-HE-3.0T U-HE-5.0T
Umthwalo olinganisiweyo 3000 kg 5000 kg
Max.unloading Ukuphakama 3500 mm 3500 mm
Ubunzima bebonke 4500 kg 7800 kg
Ubungakanani beMandla 16 ° -30 ° 16 ° -30 °
Injini yeModeli I-injini ye-YUNNEI 490 eyenziwe yatshona I-YUNNEI 4102 Injini eyenziwe ngesahlulo esikhulu
Injini yamandla 55kw 76kw
Indlela yokuqhuba Ukuqhuba-wheel ezine Ukuqhuba-wheel ezine
Imo yoLawulo Kucacisiwe Kucacisiwe
Ngaphambili iTire Itayara yocingo lwentsimbi engama-20.5 / 70-16 Itayara yocingo lwentsimbi engama-900-20
Ngasemva kweTire 20.5 / 70-16 Ukudinwa komoya 16 / 70-20 Itayara yomoya
Ukucoca umhlaba Ngama-280 mm 32 mm
Isondo lamavili 2250 mm 2450 mm
Ubungakanani beRadiyo yokuGuqula 3750 mm 4250 mm
Ubukhulu. Isantya 25-30km / s 25-30km / s
Imilinganiselo 4450 * 1800 * 2600 mm 5350 * 2100 * 2800 mm
Egqithileyo I-CE ye-ISO eqinisekisiweyo ye-1ton 2ton ye-3 itoni yombane we-forklift eyenziwe e-China UKUthengiswa
Okulandelayo: I-CE ye-ISO eqinisekisiweyo yokuma kwe-forklift yohlobo olwenziwe e-China UKUTHENGISWA
I-Cherry Picker Forklift
Umkhethi weFolk Forklift
CE ISO 1ton 2 itoni 3 ton 3 ton diesel CE ...
I-CE ISO eqinisekisiweyo ye2.5 yeetoni yedizili eyenziwe i ...